सत्ता गठबन्धनका ५ दल- एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा कसको पोजिसन के ? यस्तो छ हिसाबकिताब — Sanchar Kendra
सत्ता गठबन्धनका ५ दल- एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा कसको पोजिसन के ? यस्तो छ हिसाबकिताब
काठमाडौँ। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले पछिल्लो पटक दिएको समयसीमा सकिने ११ दिन मात्र बाँकी रहँदा यसको भविष्य के हुने भनेर अझै अन्यौल छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनका पाँच दल नै पाँचतिर लागेपछि एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै दबाबमा परेका छन् ।
१६ फागुनभित्र संसदबाट एमसीसी पारित नगरिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रनसक्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त हुँदै आएको अनुदान ऋणमा नेपाललाई हेर्ने नीति फेरिन सक्ने भन्दै देउवा दबाबमा परेका हुन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी सरकारको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर टर्‍याे, माओवादी केन्द्रकाे अनुराेधका कारण । एमसीसीमा छिनोफानो गर्न आज दिउँसो ३ बजे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुँदैछ ।
माओवादी केन्द्र : माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताउन थालेका छन् । माओवादीभित्र देव गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षधरहरू एमसीसीको तीव्र विरोधमा छन् । अर्काे धार पनि त्यति आक्रामक छैन । तर, अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको पक्षमा लागे आगामी निर्वाचनमा असर गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ । त्यही भएर चुनावपछि मात्र एमसीसीबारे निर्णय लिइनुपर्ने मत माओवादीमा छ ।
अघिल्ला सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि एमसीसी अगाडि बढाउन साथ दिएका थिएनन् भने हालका सभामुख अग्नि सापकोटा पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिने बताइरहेका छन् । सभामुखका आलोचना प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्ने गरेका छन् । सरकारले अगाडि बढाएका बिजनेस सभामुखले राेक्न नमिल्ने उनी सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनले त मंगलबार एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन नै गरे । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सडकमा उत्रिएका थिए ।
एकीकृत समाजवादी : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा संशोधन बिना एमसीसी पारित नै नहुने बताउँछन् । एमसीसीको सवालमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका लाइन मिल्न जान्छ । एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठन पनि मंगलबार प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
जसपा : ‘पर्ख र हेरको नीति’ लिएको जसपामा पनि दुई लाइन छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको निर्णय कुरिरहेका छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । भट्टराईले मंगलबार ट्वीट गर्दै एमसीसीका पक्षधर र विरोधी एउटै सरकार/गठबन्धनमा बस्न नहुने बताइसकेका छन् ।
एमसीसी जसरी पनि टेबुल भएर छोड्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी सम्झौतामा कम्युनिष्ट दलहरूको पनि सहभागिता रहेकाले धोका दिन नपाइने बताएका छन् । पौडेलले भने ‘माओवादीले एमसीसी सदनमा टेबल गर्न नदिए पनि भोलिपर्सी त आखिर टेबुल गर्नु छँदैछ, यो जसरी पनि टेबल भएर छोड्छ ।’
एमसीसी सम्झौता जसरी पनि अनुमोदन हुने पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । काँग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले काँग्रेस धेरै उग्रबामपन्थीजस्तो देखिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘म धेरै व्याख्या नगरी भन्छु, कांग्रेसले जीवनभर राजनीति गर्‍यो , यहि राजनीतिको निरन्तरतामा एमसीसीको परिणाम आउने हो । काँग्रेसले आर्दशको राजनीति गर्दा सत्ता रहला नरहला तर आफ्नो राजनीतिमा रहनुपर्छ ।’